इरानको राष्ट्रपति पदमा कट्टरपन्थी इब्राहिम रइसी निर्वाचित, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया कस्तो ? | एक्सप्रेस | GNN Nepal GNN Nepal इरानको राष्ट्रपति पदमा कट्टरपन्थी इब्राहिम रइसी निर्वाचित, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया कस्तो ? | एक्सप्रेस | GNN Nepal
असार ६ गते, २०७८ १२:४३ मा प्रकाशित
एजेन्सी । इरानमा राष्ट्रपति पदको लागी भएको निर्वाचनमा कट्टरपन्थी मानिने इब्राहिम रइसी निर्वाचित भएका छन् । रइसी हाल इरानको सर्वोच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश पनि हुन् । न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार ९० प्रतिशत मतगणना गर्दै रइसीलाई १.७ करोड मत प्राप्त भएको थियो । रइसीले अब अगस्ट महिनाबाट पदभार सम्हाल्नेछन्।
चुनाव जितेपछि उनले सरकारप्रतिको जनविश्वासलाई बलियो पार्ने र पूरा देशको नेता बन्ने वाचा गरेका छन्।
इरानमा कट्टरपन्थीले चुनाव जितेसंगै विश्वले पनि प्रतिक्रिया जनाएको छ । विशेषत इजरायलले इरानमा इब्राहिम रइसीलाई नयाँ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको चुनावलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गम्भीर चासो दिनुपर्ने जनाएको छ । इजरायली विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिओर हैअतले रइसीलाई इरानको अहिलेसम्मकै कट्टरपन्थी राष्ट्रपति बताएका छन्।
अहिले इरानका प्रधानन्यायाधीश रहेका रइसी अतिरूढिवादी विचार राख्छन्। अमेरिकाले उनीविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाएको छ। उनी राजनीतिक बन्दीहरूलाई दण्ड दिइएका मुद्दामा संलग्न थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया यस्तो छ
— יאיר לפיד – Yair Lapid? (@yairlapid) June 19, 2021
लामो समयदेखि इरान र इजरायल एउटा छाया युद्ध मा छन् जसको असर दुई देशहरूका बदलाको भाव झल्कने गतिविधिमा देखिन्छ।
ट्वीटमा प्रवक्ता हैअतले रइसीलाई सन् १९८८ मा हजारौँ राजनीतिक बन्दीहरूलाई मारिएको सन्दर्भ जोडेर उनलाई ुतेहरानको निर्दयी हत्याराु भनेका छन्।
रइसी मृत्युदण्डसम्बन्धी समितिुका चारमध्ये एक न्यायाधीश थिए जसले पाँच हजार पुरुष तथा महिलालाई मृत्युदण्ड दिएको एमनेस्टी इन्टर्न्याश्नलको भनाइ छ।
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रइसीलाई बधाई दिँदै आफूहरूबीचको ुपरम्परागत रूपमा रहेको मैत्री र राम्रो छिमेकीको सम्बन्धुलाई स्मरण गरेका छन्।
सिरिया, इराक, टर्की र यूएईका नेताहरूले रइसीलाई बधाई दिएका छन्।
गाजापट्टिमा नियन्त्रण राख्ने प्यालेस्टेनी लडाकु समूह हमासका एक जना प्रवक्ताले इरानको ुप्रगति र समृद्धिुको कामना गरेका छन्।
यद्यपि मानव अधिकारवादी समूहहरूले रइसीमाथि अमानवीय अत्याचारको कसीमा अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन्।
ह्युमन राइट्स वाचका माइकल पेजले भनेका छन्, ूइरानको दमनकारी न्यायपालिकाको प्रमुखका रूपमा रइसीले इरानको पछिल्लो समयका निकै जघन्य अपराधको नेतृत्व गरेका छन् जसको अनुसन्धान र उत्तरदायित्व बहन गर्नु आवश्यक छ।ू
१४ सांसदहरुलाई छिटाे पदमुक्त गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण
भदौ ३ गते, २०७८
सार्वजनिक हुँदै आईफोन १२, कस्तो देखिएला ?